၁ နှစ် +; အောင်မြင်မှုကိုအာမခံပေးမည့်ရိုးရှင်းသောအစွန်အဖျား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
1 တစ်နှစ် + ပေါ်တွင်; အောင်မြင်မှုအာမခံတံ့သောရိုးရှင်းတဲ့အစွန်အဖျား။
ငါညစ်ပတ်လုပ်ခဲ့တယ်ကတည်းကတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရပ်တန့် fiendish ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခြောက်နှစ်နေ့စဉ်ခြောက်လှန့်နေတဲ့ဘောင်းဘီထဲကို ၀ င်လိုက်တာကအဲဒါဟာ matrix ကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။ အရာအားလုံးကျိုးပဲ့နေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းနေတယ်၊ ​​အဝတ်အချည်းစည်း၊ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လအတော်ကြာတယ်။ shit လိုခံစားရတယ်
မည်သို့ပင်ငါကထဲကပေါ့။ ငါဒီစာမူကိုပို့နေတယ်၊ ​​အကြောင်းကတော့ငါကဆိုးဝါးလှတဲ့ဘောင်းဘီထဲကိုပြန်ကျသွားတယ်၊ ဒီဟာကဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိနေလို့ပါ။ ဒီ subreddit ကိုမှတ်မိပြီးဒီစကားလုံးတွေဟာသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ပရိသတ်ဆီရောက်အောင်သေချာစေချင်တယ်။ ငါဒီမှာရေးထားတာတွေကိုနားလည်ပြီးသင်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ငါကတိပေးတယ်။ ဒီဟာရှည်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်အလေးအနက်ထားမယ်ဆိုရင်သင်ဆုံးရှုံးဖို့ zilch ရှိတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပါ ဒီမှာအစပျိုးမှုအားလုံးကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်မအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။
လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ။ ပြီးတော့မင်းဘာသိလဲ ဒီအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒီနေရာမှာအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတိုင်းအောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်ထားလို့သင့်မျက်နှာကိုငါဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာသင့်ကိုသူလျှို့ဝှက်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ သင်တစ်နေ့ကျရင်၎င်းကိုမည်သို့မြင်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကဒီနက်ရှိုင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကခက်ခဲတဲ့အားထုတ်မှုလိုတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင် ထပ်မံ၍ အားစိုက်ထုတ်ဖို့မလိုပါ။ Nada ။ သုည။ ဇိုင်းလ်
ဒါကြောင့်မင်းကမင်းရဲ့တစ်နေ့တာကိုမင်းသွားနေပြီ၊ ကျပန်းကျပန်းစာမျက်နှာတစ်ခုခုကိုမင်းကြည့်နေတယ်။ click ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ random pic သည်သင်၏မျက်လုံးကိုတစေ့တစောင်းကြည့်လိုက်သည်။ သင်ဖတ်နေသည့်နေရာကိုပြန်ကြည့်ပါ၊ ခဏ ဆက်၍ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ၊ ထို့နောက်နောက်ထပ်ခဏရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်ဖတ်နေသည့်နေရာသို့ပြန်သွားပါ၊ ဤအချိန်အနည်းငယ်ပိုကြာသည်။ Oooh၊ ဒါဘာလဲ ဒါကြည့်ကောင်းပါတယ် ရုတ်တရက်သော်လည်းအနည်းငယ်နှုန်းတိုး။ ဟေးငါမနေသင့်။ ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး မျက်လုံးကတုန်ခါနေတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်း! ဟင့်အင်း၊ နောက်တဖန်မျက်စိပြန်တုန်ခါ။ မျက်လုံးကရပ်နေ Ooooh! ကြည့်ရတာ goooooooood! မျက်လုံးကရှည်လွန်းတယ် ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ရုတ်တရက်သင်သည် Snow White ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဘဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းငယ်သောအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာများကိုမျက်စိကန်းသော medgets ကကြည့်နေသည်။
amygdala ၏ကြား၏? ဒီ dude နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ အဲဒါမင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ရန်သူပါ။ ရွေးပါ။ တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား။ တကယ်ကိုရေနံစိမ်းအဆင့်ဆင့်ပေးခွင့်ပြုပါရစေ။ ဦး နှောက်ပင်စည်သည်လုံးဝကုန်ကြမ်းဒေတာကိုကိုယ်စားပြုပြီး neocortex (ပိုမိုမြင့်မားသော ဦး နှောက်) သည်အဆင့်မြင့်သတိကိုကိုယ်စားပြုပါကအမိဂဒလာသည်ကုန်ကြမ်းဒေတာမှတွန်းအားနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အချက်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအတွေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤအစီအစဉ်တွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း NSA ၏ keylogs များ၌သိမ်းဆည်းထားသော SHIFT + CTRL + P မတိုင်မီ ၃ စက္ကန့်တွင်ဖြစ်ပျက်သောဂန္ထဝင်“ ငါမဝါးဘူး” ဆိုတာဘာလဲ။
သင်၏မျက်လုံးသည်စာမျက်နှာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ သင့် ဦး နှောက်သည်အနည်းငယ်သောအရာများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်မိတ်ဖက်။ ထိုအခါကျန် - ya ကိုသိအမှန်တကယ်စကားလုံးများကိုပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်သမျှသောမလိုအပ်သော crap processing ။ ဒုတိယမျက်လုံးခတ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြန်လာရန်မလိုအပ်တော့ကြောင်းသင်သိပါသလော။ ရုပ်ပုံကိုသတိမပြုမိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီသင်၏ ဦး နှောက်သည်လမ်းကြောင်းကိုချထားပြီးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏မှတ်ဉာဏ်သည်သင့်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံကိုက်ညီသောအလဂိုရီဇင်များကြောင့်ချက်ချင်းအစပျိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ fuck ဆိုတဲ့အဘယျသို့ dude "။
ကောင်းပြီ၊ ပိုတိတိကျကျပြောရရင်မင်းမျက်လုံးတွေစောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာသင်ပြန်လာမယ့်လမ်းကိုကျော်သွားပြီဆိုတာပဲ။ သို့သော်ဒုတိယအကြိမ်မြင်တွေ့ရခြင်းသည်များသောအားဖြင့်သင်တုန့်ပြန်ရန်အလွန်မြန်လွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အေးခဲနေသောရေကန်ကဲ့သို့ပထမ ဦး ဆုံးတစေ့တစောင်းသည်ရေခဲကိုကွဲစေပြီးဒုတိယအကြိမ်မှာအပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကုန်ကြမ်းဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့မှု၏အဓိကကျသည့်အချက်မှာအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ တစေ့တစောင်းတိုင်းသည်တစေ့တစောင်းဟော်မုန်းများထုတ်လွှတ်သည်။ သို့သော်အလွန်သေးငယ်သော။ ဟော်မုန်းများပေါက်ကွဲခြင်းလား။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောဂိုးတံခါးဖွင့်လှစ်။
အခုငါပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်သမျှအားလုံးဟာဒီဖြစ်စဉ်ကိုအတိအကျဖြိုဖျက်ပြီးသင်စင်ကြယ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့ဆိုတာပဲ။ ဘာမှပို ကြောင်းကိစ္စအတွက်လျော့နည်းဘာမျှမ။
ကောင်းပြီ၊ “ လျှို့ဝှက်ချက်များ” နှစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအောက်ခြေကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ကတူညီတဲ့သူကပြောတယ်။
တစ်: မကြည့်ပါနဲ့။ အားလုံး AT ။ ဘာလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး သုည peeking ။
ဒုတိယအချက် - လူတစ်ယောက်ကဂုရုဆီသွားပြီး“ သခင်၊ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားပါစေကျွန်မရဲ့တပ်မက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး” လို့မေးတယ်။ အဆိုပါဂုရုသစ်ပင်မှတက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သစ်ပင်ကိုပွေ့ဖက်။ သူက“ အကူအညီ၊ ဒီသစ်ပင်ကနေငါမရပ်နိုင်၊ ငါ့ကိုကူညီပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကူညီ၊ မကူညီနိုင်ဘူး” ဟုအော်ငေါက်အော်ဟစ်လေသည်။ ထိုသူသည်ဤအပြုအမူကြောင့်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရခက်သည်။ "Guru, အဘယ်ကြောင့်သင်အော်ဟစ်နေကြသနည်း မင်းကသစ်ပင်ကိုကိုင်ထားသူပဲ၊ မင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့သစ်ပင်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်၊ မင်းကိုမကိုင်ထားဘူး၊ ဒါဆိုဘာလို့အော်ဟစ်နေတာလဲ” ။ Guru ကသူ့အိတ်ကပ်ထဲကမှန်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးလူကိုသူ့မျက်နှာပြနေတယ်။
အဲဒါမင်းပဲ။ မပေးသင့်ရဲ့ ဦးနှောက်။ မပေးသင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ. သငျသညျ။ ဘယ်ကနေလာတာလဲ အဲဒါမင်းပဲ။ ဟုတ်တယ်၊ သင်ဤအရာကို ၁၀၀% ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုပ်နေပြီးသင်ပင်မသိပါ။ သငျသညျပုံစံကိုချိုးဖောက်တစ်ချိန်ကသင်ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အခုသင်ဖတ်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်ချက်ရဲ့။ အမ်ညဒါရိုက်တာစသည်တို့ကို
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းခလုတ် sequence ကိုရန်။ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အနားယူခြင်းဟော်မုန်းများထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်သင်၏မြင့်မားသောအသိစိတ်ကိုအနည်းငယ်မျှသာပိတ်ထားလိုက်သည်။ ရုံဖွင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့။ ဘယ်တတိယကိုဖွင့်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းနောက်တွင်သင်၏အဆင့်မြင့်သောအစီအစဉ်များကိုလုံလောက်စွာပိတ်ထားခြင်းကြောင့်စတုတ္ထ၊ ပဉ္စမနှင့်မည်သည့်အရိပ်အယောင်ကိုမဆိုသင့် ဦး နှောက်ကိုအပြည့်အ ၀ ပြောင်းစေနိုင်သည်။
အတွေး (သို့) ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (သို့) အတွေးအခေါ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ / linear / ဆင်ခြင်တုံတရားအတွေးအခေါ်ကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤအရာသည်အထင်ရှားဆုံးသောစကားရပ်မှာညဘက်၌သင်အိပ်မက်မက်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကူးအပြောင်းကာလတွင်သင်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု / ဆင်ခြင်တုံတရား / linear အတွေးများကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးသင်အိပ်မပျော်မီခေတ္တသင်္ကေတ / အမြော်အမြင် / အပြိုင်အတွေးတစ်ခုကိုစတင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ နိုးထနေသည့်အိပ်မက်နှင့်အိပ်မက်သို့ကူးပြောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ တဖန်သင်တို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်, Ol 'Woody အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်ဝက်ရွက်တိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှု? ငါ့အတွေ့အကြုံကငါ့ကိုပြောပြသည်။
အလားတူပင်သတိပြုပါသတိပြုစရာတစ်ခုမျိုးပွားသဘာဝတရား၏စိတ်ကူးယဉ်ဖျော်ဖြေသောအခါ, သင်တူညီသောသို့မဟုတ်အပြိုင်သို့မဟုတ်အမြော်အမြင်အတွေး၏ 2nd mode ကိုသို့ချော်? စိတ်ကူးစိတ်သန်းပိုမိုပြင်းထန်လာပြီးလှုံ့ဆော်မှုများလေ၊ သင်သွားလေအိပ်မက်မက်လေလေဖြစ်သည်။ IF-THEN ၏ယုတ္တိဗေဒနှင့် Ol 'Woody သည် ပို၍ များပြားလာလေလေဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းထဲနက်လေလေသင့် ဦး နှောက်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအစီအစဉ်များကိုပိတ်ပစ်လေလေဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား, ရှေးရှေး, ခလုတ် sequence ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏မျက်လုံးသည်ကြာရှည်လာသောအခါ၊ သင်သည်အိပ်မက်မုဒ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်နည်းနည်းပဲ အနည်းငယ်လုံလောက်ပါတယ် ခွင့်လွှတ်မှုနည်းသောနေရာ၌ခဏအိပ်ခွင့်ပြုပါ၊ နိုးလျှင်နိုးလျှင်မြန်လိမ့်မည်။
Dummy အဘို့ထိုသို့ပြုမှမည်သို့: Brahmacharya သင်လုပ်ရန်မှာလိင်ဆိုင်ရာအတွေးအားလုံးကိုပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့မျက်နှာတွေကိုငါကြည့်ပြီးပြီ ထိတ်လန့်စရာ။ ဟင့်အင်း၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မင်းငါ့ကိုငါ့ကို prude ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်စေချင်တာလား။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းကိုမင်းက prude လုပ်စေချင်တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အပြာရောင်ဘောလုံးတွေရလိမ့်မယ်။ ချွတ်ပါ မကြာခင်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ပထမတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ထိုအခါမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သောသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါဖြစ်နိုင်သမျှ 2nd သဘာဝသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါဒုတိယသဘောသဘာဝသည်အသက်ရှူခြင်းသို့ထွက်သွားသည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များဖြစ်ပျက်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ လိင်ဆိုင်ရာအတွေးအမြင်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ အတွေးတိုင်း၊ တစေ့တစောင်း၊ တစ်ခုခုကြားနိုင်ဖို့ကြိုးစား၊ တစ်ခုခုကိုခံစားရန်၊ တစ်ခုခုထိရန်၊ ဒါကငါမ peeking အားဖြင့်ဆိုလိုတာ။ သင်၏နှလုံးထဲအနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာ၌ပင်လျှင်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ကိုဗြဟ္မဟာရဟုခေါ်သည်။ ကြည့်ပါ ဦး! ငါနင်နင်နင့်ကိုသိတာပေါ့နင့်လင့်ခ်တွေနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါ ဦး ။ ONE TWO THREE.
လူတိုင်းထိုသို့ပြုရန်မလိုပါ သို့သော်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒါမဟုတ်ရင်မပေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကစွဲလမ်းတယ် တစ် ဦး စွဲချိုးဖျက်ဖို့သင်တစ် ဦး တင်စားထားတဲ့ sledgehammer လိုအပ်ပါတယ်။ ငါရွေးစရာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ သင်ရရှိမည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုရွေးနိုင်သည် $0or $ 1?0$ သို့မဟုတ်2$? $0လား $ 10 လား။0$ သို့မဟုတ် $ 50?
သိသာထင်ရှားတဲ့ဘယ်သူမှ $0ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဒီလူထုံကဘာလဲ ဒါကြောင့်သင်နားလည်တယ်…ယခုသင်၏ဆုကြေးငွေစနစ်သည်ထိုအတိုင်းပင်စဉ်းစားသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ “ ငါဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာယူမယ်၊ ဒေါ်လာ ၂ ရဖို့သုံးမယ်၊ ဒေါ်လာ ၅၀ ရဖို့အတွက် ၁၀ ဒေါ်လာရနိုင်တယ်။ မင်းငါ့ကို 1 ဒေါ်လာယူစေချင်တာဘာလဲ။ ဒီမှာလူမိုက် fuck ဆိုတဲ့ရယူပါ, whatcha ငါ့ကိုယူ? ငါ dolla တစ်ခုလုံးရနိုင်တဲ့အခါဘယ်သူ့ကိုမှငွေမ ၀ ယ်ဘူးလား။ ” ။ crackhead ကို dolla ပေးပါ၊ သူကအက်ခရာတချို့ကိုလုပ်ပြီး mo dolla ကိုလုပ်တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး။
$0or $0ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ $0မှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ရိုးရှင်းသော။ သင်ဒေါ်လာ0ရရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းပျော်တယ်။ သတိ၊ အချက်တစ်ခုစီကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါကတစ်ဒေါ်လာကိုဘယ်ဒေါ်လာကမှပိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ကအရသာ ၁ ဒေါ်လာလောက်ရချင်တယ်။ ၂ ။ သွားစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်တစ်ခုခုရှိပါတယ်အဖြစ်ကလိမ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာမလွှဲမရှောင်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတို့၊ nofap ကိုသင်အားစိုက်ထုတ်ရသည့်အကြောင်းရင်း၏အဓိကရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏မျက်လုံးများရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှသင်၏နောက်ကွယ်ရှိစိတ်ထဲရှိအလွှာ ၃၀ ခန့်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသတိရှိရှိချမှတ်ပြီးကြောင်းသင်၏မြည်းကိုအလောင်းအစားလုပ်သည်။ ဒါကဝေးပြန်, သငျသညျ peeking ခဲ့ကြသည်။ မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမတိုင်မှီကပင်လမ်းတစ်လမ်းခြားသို့သွားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောတိုက်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာအဲဒါကိုကြားဖြတ်ပြီးသင်၌အလုပ်သုညဖြစ်လိမ့်မည်။ များများလေလေ၊ IT ခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။
ဝိပassနာဘာဝနာဝိပwhereနာဘာဝနာဝင်ရောက်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုမမြင်နိုင်မှီတိုင်အောင်သင်၏စိတ်ထဲတွင်အလွန်နောက်ကျကျန်နေရန်သင်ကြားပေးသည်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကသင်ဟာ user level process တစ်ခုကိုအစပျိုးဖို့ root level process တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အသုံးပြုသူအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်သတ်ပစ်သည်။ rootkit ထုတ်လုပ်သူများသည်ဘဏ်သို့လုံးလုံးရယ်မောနေကြသည်။
အဘယ်အရာကိုပုံမှန်ဖြစ်သနည်း ငါနောက်ထပ်တစ်ခုခုထည့်ပါလိမ့်မယ် ဒီဟာကိုပြောတာငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ ခဏတာကိုမှတ်ထားပါသင့်ကိုလိင်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အားလုံးကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ မင်းကိုမင်းကမင်းကို prude လို့ခေါ်ခဲ့သလား။ ငါ prude မဟုတ်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ကတော့သင်ဟာယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ မင်းရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့ပုံမှန်ဟာမှန်ပါတယ်၊ သဘာဝကဖြစ်လိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ပုံမှန်ဟာပုံမှန်အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ဆင်တူချက်တွေထက်ကျော်လွန်နေပြီ။ မင်းအဲဒါနားလည်လား ထိုရုပ်သွင်နှင့်အတွေးများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများအားလုံးသည်“ ပုံမှန်” နှင့်“ အခြားနေ့ရက်တစ်ရက်” ဖြစ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။
သင့်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကသင်ကြားပေးပြီးမင်းရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ကသင့်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုလို့ပြောတာကြောင့်သင်ကခုန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ယခုသင်သားဘယ်မှာရှိနေသည်ကိုအတိအကျကြည့်ပါ။ ဤသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းသည်သင်ဒီမှာရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့“ ပုံမှန်” ဟာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းထက်ကျော်လွန်ပြီးလိမ်နေတယ်။ ဒါဟာ "ပုံမှန်" မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါကနောက်ဆုံးတွင်ဇိအုန်မြို့ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါ၊ သာမန်လူများကသင်ယခုပြုလုပ်နေသည့်အတိုင်းအတာအထိစိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာစိတ်ကူးမထားပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ သာမန်လူတွေဟာလိင်ဆက်ဆံပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။ ရုံသင်အခုလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါကသူကပြောတယ်သေချာပါတယ် ငါ့ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကိုတောင်မပေးနဲ့၊ မင်းကိုငါအရှက်ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့မပြောနဲ့။ မင်းကိုငါမလာခင်ကတည်းကမင်းကိုအရှက်ရအောင်လုပ်ဖို့သင်ဟာအံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤတွင်အဖြစ်မှန်ကနေကောင်းတဲ့ပါးရိုက်သည်။ ယူပါ
သင့် ဦး နှောက်ကိုထိုကဲ့သို့သောယုတ္တိဗေဒဖြင့်ဆေးကြောခဲ့သောမျိုးဆက်သည်ကြီးပြင်းလာသောအခါမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်မရှိပါ။ အဲဒါသင်နဲ့သူတို့ကြားကခြားနားချက်ပဲ။ အဲဒါကိုစိတ်ထဲမှာထားပါ။ ထိုအချိန်ကသာမန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များဖြစ်ခဲ့လျှင်ယခုအခါကပ်ဘေးကြီးဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ထူးခြားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သက်သက်သာသာနဲ့“ ငါ” နဲ့“ မင်း” ကိုဒီနေရာမှာသုံးပါတယ်။ ဒီ post ကိုငါချစ်ခြင်းမေတ္တာအမြင့်ဆုံးဖော်ပြချက်မှာရေးထားတာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ အဆိုပါအချက်ရပ်! ဤအရာကိုပြောသောအခါကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ။ သင်၏လက်ရှိအခြေအနေသည်ပျမ်းမျှတစ်ရက်လိုအပ်သည်ထက်များစွာလွန်စွာဝေးလံသည်။ တပ်မက်မှုဆီသို့ ဦး တည်သောစွမ်းအင်သည်သင်လုပ်နိုင်သည်ဆိုပါစို့၊ သင်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။
ငါ '' ပုံမှန် '' ငါသုံးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစကားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်ငါဒီမှာတုံးမှတ်ချင်တယ်။ ၎င်းသည် 'ပုံမှန်' ဖြစ်သင့်သည်။ ယနေ့ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောလူအများစု၏အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ပါ။ ဒါက 'ပုံမှန်' ကိုတက် fucked ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီဟာကိုအခြေခံအားဖြင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ဆွဲငင်အားကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဒီစကားလုံးကိုသုံးခဲ့တာပါ။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စာဖတ်ခြင်းအတွက်များစွာသင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထိုအရာမှသင့်ကိုခြေချင်းခတ်ဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဤအရာမှတစ်ခုခုကိုသင်တောက်ပစေမည်ဟုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အဲဒါမလွယ်ဘူး သို့သော်၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။
မေး: ဒါပေမယ့်အင်တာနက်အပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသော pics ရှိပါတယ်, အဘယ်အရာကိုငါလုပ်ဖို့ထင်ကြသလော
LINK - 1 တစ်နှစ် + ပေါ်တွင်; အောင်မြင်မှုအာမခံတံ့သောရိုးရှင်းတဲ့အစွန်အဖျား။ ဟုတ်ပါတယ်, အာမခံချက်။ 100% ။ သိပ္ပံပညာ၏တစ်ဦးကနည်းနည်း, ကအလုပ်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်တစ်ဦးဥပစာ။
အားလုံးကြင်နာတုံ့ပြန်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါဒီမှာတစ် ဦး ချင်းစီအငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ထပ်ပေါင်းထည့်ရအောင်။ တကယ်ရမ္မက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့: ငါမိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းပြုပါရန်အသုံးပြုနှစ်ခု tools တွေရှိပါတယ်။
၁) မျက်စိတုန်ခါမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ SNAP TOTENTION ဖြစ်ပြီးသာမန်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိကိုမကြိုက်ပါ။ လိင်နှင့်မဆိုင်သောအရာနှင့်အရာအားလုံး အရာဝတ္ထုကိုကြည့်ပြီးစုပ်ယူပါ။ ဒါကမြက်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်တယ် ၎င်းသည်လေထုထဲတွင်မည်မျှအစိမ်းရောင်ရှိကြောင်း၊ သင်၏အပြည့်အဝအာရုံစူးစိုက်မှု, ကအားလုံး။ အုတ်ကိုကြည့်ပြီးအုတ်ခဲကိုကြည့်ပါ။ ၅ စက္ကန့်ကြာအောင်အာရုံစူးစိုက်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်တော်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရှိရမည်။ ဒါကသင့် ဦး နှောက်ကိုပြောတာက X Impulse ကအရမ်းအားကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီမှာ Y ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်၊ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဤအရာကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်ယူလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာသင်မကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်ကြွစွာ rewiring နေပါတယ်။ သင်တစ် ဦး ကို PC သို့မဟုတ်ပြင်ပရှိမရှိကြည့်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တိုင်းလုပ်ပါ။
2. ) သူတို့ကအဲဒီမှာဆင်းဖွဲ့စည်းအဖြစ်ကြောင့်တိုက်တွန်း interrupt ရန်။ မတ်တတ်ထပါ။ အားလုံးလေကိုထုတ်လွှတ်ပါ။ (AB လေဟာနယ်) ၌သင်တို့၏ ABS စို့။ အခုတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့သော kegel လုပ်ပါနှင့်သင်၏ abs သည်သင်၏ရင်ဘတ်သို့ ဦး တည်အထက်သို့ဆွဲနိုင်သကဲ့သို့အဖြစ်ထိုအရပ်မှအထက်သို့ဆွဲ။ မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပါကသင့်ဒစ်နှင့်တွဲနေသောကြိုးရှိသကဲ့သို့ခံစားရလိမ့်မည်။ ဝမ်းဗိုက်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ အပေါ်သို့ဆွဲပါ။ သငျသညျစွမ်းအင်သို့မဟုတ်အသွေးစီးခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်သာယာသောခံစားရဒေသတွင်းရှိသမျှခံစားရလိမ့်မယ်။ ဤသည်အမှန်တကယ်နှိုးဆော်သံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိတ်ထားပါလိမ့်မယ်။ သင်ကအတော်လေးခက်ခဲအောင်လုပ်ရမယ်၊ ဒါကသင့်တင့်တဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ဒါဟာညာဘက်ကြွက်သားကိုရှာဖွေခဏယူပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်ကသင်ဤကြွက်သားညာဘက်သင့်ရဲ့ဒစ်၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့သောကွောငျ့, သငျသညျဆီးအိမ်ဒေသထဲမှာခံစားမိပါလိမ့်မယ်အရာတစျခုသိကြလိမ့်မည်ကိုရှာဖွေတစ်ကြိမ်။ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ ကြွက်သားတစ်ခုမှာ set ကိုဆီးအိမ်အနီးရှိရုံအထက်ပါဒေသအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့။ ကြွက်သားတစ်ဦးကစက္ကန့်ထားသည့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်မှပိုမိုနီးကပ်စွာအောက်ပိုင်းဒေသအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့။ သင်က 2nd set ကိုမဟုတ်ဘဲပထမဦးဆုံးချင်ပါတယ်။ နှစ်ခုအကြားခံစားချက်အတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားချက်ရှိ၏ ပထမဦးဆုံး / အထက်အစုပါဝငျတင်းမာမှုငျ့သှားမထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကလုပ်နေတာသောကြွက်သားခံစားရနိုင်ပါတယ် celibate ရဲ့ pose (ဗြဟ္မာမရိယာ) ။ သင်ခံစားမိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်မှားယွင်း။ မရပါ။ သင်နှိုးသောအခါအနိမ့်ဝမ်းဗိုက်တွင်အရည်တစ်မျိုးစုမိပြီးဖိအားများလာသည်နှင့်အမျှလိင်ဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်တိုက်ဆိုင်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သင်ဤကြွက်သားကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပါက၎င်းသည်ဤတင်းမာမှုကိုပျောက်ကွယ်သွားစေပြီးအထက်သို့ပြန်ပို့သည်။
ဒါကခက်ခဲရပ်တန့်နှင့်တူ၏။ မှန်ကန်စွာ Done အဲဒီ၏5တစ် sequence ကိုစတင်ရန်လိုသောမည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်ယှက်ပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ကြင်နာမှတ်ချက်များနှင့်ချီးမွမ်းဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်, တုံ့ပြန်နိုင်အောင်အလွန်သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်နှင့်သင်တို့ရှိသမျှကိုငါခစျြခငျငါသည်သင်တို့ကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတဆင့်ရမြင်ချင်သောကွောငျ့ရှိသမျှတို့ကိုငါဒီအရေးကိုကိုယ်သိရ! ဘွားလက်သစ် Go!
ငါ prude မဟုတ်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ကတော့သင်ဟာယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ မင်းရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့ပုံမှန်ဟာမှန်ပါတယ်၊ သဘာဝကဖြစ်လိမ့်မယ်။
မင်းအိပ်နေပြီလား သင့်ရဲ့စာမူအချို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးအချို့သည်လွဲမှားစွာ (လွဲမှားသောသိပ္ပံပညာဘာဝနာရှုခင်းများ) ဖြစ်သော်လည်း၎င်းမျဉ်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကတည့်တည့်ဖွင့်, သင်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ခံစားရသင့်ပါတယ်။
သငျသညျရိုးရိုးသားသားယုံကြည်သည်လူသားမဟုတ်ပါ, ယေဘုယျအားဖြင့်သက်ရှိအရာဝတ္ထုအလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါသည် 'သင်၏အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်' တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှေးကွေးခြင်း၊ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများကိုသဘာဝမဟုတ်ကြောင်းနှင့်“ မင်းကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကသင်ကြားပေးသည်” ဟုသင်ရိုးသားစွာယုံကြည်ပါသလား။ မျိုးပွားနိုင်ခြင်းသည်ရိုးရိုးဥာဏ်စွမ်းအရှိဆုံးသောသတ္တဝါများပင်လျှင်မေ့လျော့နေပြီလား။ ၎င်းသည်အခြေခံအသက်တာ၏လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်တူအဆင့်တွင်ရှိပြီး“ must have”“ must must” သောက်သုံးသင့်သည်။
ငါဒီ post ကိုရေးတဲ့အခါငါစာရေးနေတုန်းကျွန်တော်သိလိုက်တာကဒီဝါကျဟာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ကိုဘာလို့ဒီအောက်မှာဖော်ပြထားတာလဲ။ ငါ“ ငါ့ပုံမှန်ဟာစစ်မှန်တဲ့ပုံမှန်ပဲ” လို့ပြောတာလုံး ၀ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နင့်နိုးထဖို့ဒီပါးရိုက်ကိုလိုတယ်။ ၎င်းသည်ဖော်ပြချက်၏ပုံသဏ္asာန်အနေနှင့်ဖြစ်ပါစေ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်အမည်ဖြင့်မည်သူ့ကိုမှမသတ်ပါနှင့်။ I'm
အပျိုဖော်ဝင်ကောင်းပါတယ် ဒါက 'normal' v 'တစ်ခုခုထွက်လာပြီ' ဆိုတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုလုံးကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ပြင်းထန်သောလိင်ဆိုင်ရာအတွေးများသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါက သဘာဝ အဆိုပါပုံပျက်ပေါ်ထွန်းသောအတွေးအခေါ်၏။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်၏စကားလုံးကိုရွေးပါ ယင်း သဘာဝက အရာတွေအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ပေမဲ့သဘာဝရေကိုရေချိုးကန်နဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့နေရာကဒါမဟုတ်ဘူး သဘာဝက သငျသညျတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသောအမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမှတ်တရများ၊ သင်၌မရှိခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်စသည်တို့ကိုဤထောင်ပေါင်းများစွာသောရင်သွေးငယ်များရရှိစေရန်။ သဘာဝကဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ညံ့ဖျင်းမှုဟာဒီစိတ်ဖိစီးမှုအသစ်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။
သို့မဟုတ်ပါကအခြားသောလမ်းထားရန်။ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည် ဖြစ်ကောင်း ထို့နောက်ထိုအိမ်၌အိမ်သို့သွားပြီးအသားများကိုရိုက်နှက်သည်။ အကယ်၍ အသားကိုမနင်းလျှင်သင်မည်သို့သော pudding ရနိုင်မည်နည်း။ နေတုန်းပဲရပ်နေ။ ပုံမှန်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနေရာတိုင်းမှာသွားကြည့်ပြီးခြေထောက်စွပ် ၆ လုံးကို Soyuz အာကာသအတွင်းရှိ Cactus ကိုရယ်စရာကောင်းအောင်လုပ်နေတာကိုမတွေ့ရတော့ဘူး (ဟေးငါတကယ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အရသာရှိတယ်) ။ အကယ်၍ သင်သည်သာမန်စကားလုံးကိုပြစ်မှားမိပါက CTRL + F တစ်ခုကိုလုပ်ပြီး၎င်းကို 'ကျန်းမာသော' ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ယခုတွင်သင်သည်မြင်သနည်း
သင်သည်လူများအတွက်အထူးကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာကိုမြှင့်တင်ပေလိမ့်မည်။ စိတ်ကိုထားပါ။ fap အပေါ်အားလုံးမျက်စိ စှဲမွဲမှု သူ့ဟာသူ မိမိကိုယ်ကိုမလှည့်စားပါနှင့်
ငါသည်သင်တို့ငါ့ကိုဒီမှာသံသယ၏အကျိုးခံစားခွင့်ပေးပြီမယ်လို့ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့အားလုံးစင်ကြယ်သောတည်ပြီးသတ်တယ်အသုံးအနှုန်းများထွက်စာလုံးပေါင်းရမည်ဟုအင်တာနက်၏သဘောသဘာဝဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုပိုကောင်းတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်စေလျက်, တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။